izintokazi Indwangu Factory - China izintokazi Indwangu Abakhiqizi, abahlinzeki
Sisekela abathengi bethu ngokuthengiswa okuhle kwekhwalithi enhle nomhlinzeki wezinga elikhulu. Ukuba ngumkhiqizi onguchwepheshe kulo mkhakha, sithole ukuhlangana okucebile kokukhiqiza nokuphatha izintokazi Indwangu,,,, Siqhubeka nokujaha isimo se-WIN-WIN nabathengi bethu. Samukela ngemfudumalo amaklayenti avela nxazonke zemvelo eza ngenhla ukuvakashelwa nokwakha ukuxhumana okuhlala isikhathi eside. Ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu nezinsiza, isibambo sekhwalithi ephezulu esiqinile, inani elifanele, ukwesekwa okuhlukile kanye nokusebenzisana okusondele namakhasimende, sizinikele ekunikezeni inani elifanele lamakhasimende ethu ngendwangu yabesifazane, Sikholelwa kwikhwalithi nokwaneliseka kwamakhasimende okutholwe yiqembu yabantu abazinikele kakhulu. Ithimba lenkampani yethu nokusetshenziswa kobuchwepheshe obunqenqemeni iletha imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu ekhulekelwa futhi yaziswa amakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Ijackethi Egcwele Amadoda Nentombazane
Lesi sitayela sifudumele futhi sihle. Lo mklamo ulungele bobabili abesilisa nabesifazane.Uklama kufudumele futhi kunoboya obuningi bomgunyathi.Kungumkhiqizo osezingeni eliphezulu. Kuthunyelwe emazweni amaningi emhlabeni wonke.Lemakethe enkulu yesitayela yiYurophu nenyakatho yeYurophu.
ICorduroy Vest For Ladies
Lesi sitayela siyisampula futhi siyinhle .Kungumbala wesikhumba wamawundlu wokulingisa, futhi kufudumele nemfashini.
Indwangu Ehlukile Yokuthunga Vest For Ladies
Lesi sitayela siyisampula futhi siyinhle .Leli vesti yizinhlobo ezimbili zokuthungwa kwendwangu .Yivesti eboshwe futhi imfashini kakhulu.
Indwangu Ehlukile Yokuthunga Ijacket Yamantombazane
Lesi sitayela yizinhlobo ezimbili zokuthungwa kwendwangu .Kukhululeke kakhulu; ithambile; ukukhanya. Umbala woboya bezinwele kanye ne-polyester indwangu iyafana.
Ijackethi Yangaphandle Yomfazi eneHood
Lesi sitayela silula futhi sihle. Lo mklamo ulungele bobabili abesilisa nabesifazane.Umklamo uyisigqoko esikhiphekayo nge-uziphu uziphu.Kunephakethe lesifuba kanye nephakethe langaphansi nge-uziphu uzayiloni.